एक महिना एक पटक - पुरुष मा, शुक्राणु हरेक दिन, र एक महिला मा अन्डा परिपक्व। यो oocyte परिपक्वता र uterine गुहा आफ्नो पहुँच अवधारणा लागि अनुकूल समय छ।
एक महिलाको शरीर मा सबै भन्दा आधारभूत प्रक्रिया, जो उनको आमा बन्न अनुमति दिन्छ ovulation भनिन्छ। यो जब अन्डा को uterine गुहा मा जारी र शुक्राणु संग एकजुट गर्न तयार छ समय छ। ovulation दुई दिन र दुई दिन यो पछि - सबैभन्दा अवधारणा लागि अनुकूल दिन। त्यो छ, वास्तवमा, महिनाको चार वा पाँच दिन एक महिला गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्। अवधारणा लागि अनुकूल दिन गणना गर्न - यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहिरहन्छ।
केही ovulation को लक्षण स्त्रीको आफ्नै निर्धारण गर्न सक्षम छ। यो एकदम लक्षण, तर सही प्रविधी संग संयोजन मा आत्मपुरक भए तापनि तिनीहरू तपाईं menstrual चक्र अनुगमन र गर्भावस्था लागि अनुकूल दिन निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
को follicle को कहिलेकाहीं बिच्छेद र एक महिला समयमा यो बाट अन्डा जारी गर्ने भुँडी दुखाइ महसुस हुन सक्छ। छोटो अवधि यी दुखाइ, र 2-3 घण्टा केही मिनेट देखि लागि अन्तिम। तर ovulation निर्धारण को यो विधि किनभने यस्तो दुखाइ छैन ovulation प्रत्येक चक्र मा हुन सक्छ, र केही gynecological रोगहरु सँगसँगै हुन सक्छ, तर, धेरै नाजुक छ।
को कमजोर सेक्स को केही प्रतिनिधिहरु अन्डा उत्पादन अवधि वृद्धि libido मा परीक्षण गरिएको थियो।
ovulation अघि केही दिन, योनी छुट्टी को वर्ण परिवर्तन (तिनीहरूले slimy पारदर्शी र थप प्रशस्त)। यो यस अवधिमा भएको cervix को खकार प्लग को छुटकारा हुन्छ यो हर्मोन कारण हो।
को मा ऐनामा हेर्दा ovulation, अवधि, डाक्टर एक "को छात्र को लक्षण।" नोटिस सक्छ गर्भावस्था लागि अनुकूल दिन खकार स्पष्ट छ र एक छात्र प्रभाव सिर्जना गर्दछ। को follicle खकार देखि ovum को रिलीज पछि बाक्लो र कम प्रशस्त हुन्छ।
ovulation निर्धारण को सबै भन्दा साधारण र सरल विधि - एक पात्रो विधि। यो ovulation यसको अवधि बिना पनि चक्रको अन्त अघि चौध दिन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई आधारित छ। धेरै menstrual चक्र को अवधि विश्लेषण भएको, हुन थप वा कम सही गर्भावस्था लागि शुभ दिन निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को विधि ovulation rectal मापन विधि (Basal) तापमान गणना गर्न छ। Basal तापमान - एकै समयमा हरेक बिहान मापन गर्नुपर्छ जो मलाशय मा तापमान छ। परिणाम आधारमा rectal तापमान नाप्ने plotted। सामान्य menstrual चक्र तालिका दुई चरणहरु छ: पहिलो आधा कम तापमान मूल्य र दोस्रो छ - उच्च। वक्र ग्राफ उकालो (दोस्रो चरण) जान्छ अघि, लगभग बीचमा चक्र मा, त्यहाँ 0.5-0.7 डिग्री गर्न तापमान मा एक थोपा छ। त्यो दिन (वा अर्को) मा ovulation उत्पन्न हुनुपर्छ।
अब औषधि पसल को समतल खोज्न सक्नुहुन्छ ovulation लागि परीक्षण, को मूत्र मा हर्मोन luteinizing को सङ्कल्प आधारित छन् जो। ovulation दुई वा तीन दिनको लागि, यो हर्मोन बढ्छ, सजिलै परीक्षण स्ट्रिप्स द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन जो को स्तर। सामान्यतया5परीक्षण एक महिला हरेक दिन बिताउनुहुन्छ कि एकाधिक मा। यो विधि अनुकूल दिन गर्भावस्था लागि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
ovulation निर्धारण सबैभन्दा सही विधि - अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मिसिन प्रयोग गरेर चक्र डाक्टर धेरै दिन समयमा follicle परिपक्वता र विकास, साथै यसको बिच्छेद र अन्डा को रिलीज लगािन्छ। यो विधि सबै छैन, तर केवल गर्ने ovulation र अवधारणा समस्या छ ती, निर्धारित छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूप मा, अन्डा बाहिर निस्कन समय त गाह्रो छैन निर्धारण गर्न। मुख्य कुरा हो - आफ्नो शरीर थाहा र यो सुन्न। हो, र चिकित्सा अभ्यासहरू अमूल्य हुन सक्छ। लामो अवधिको लागि गर्भ धारण गर्न सक्छन् नगर्ने महिलाहरु को लागि ovulation अधिकांश अवस्थामा। तर यस्तो विधिहरू गर्न recourse बोक्न र एक स्वस्थ बच्चा जन्म दिन सपना जो कुनै पनि महिला हुन सक्छ।
यो सत्य यी5कुरा बच्चाहरु को सेक्स प्रभावित छ?
राम्रो छ: गर्भवती महिला लागि भिटामिन? समीक्षा विशेषज्ञहरु। गर्भावस्था को समयमा उपयोगी फल र तरकारी
के हकी छ र के खेलको नियम हो। आइस हकी के हो र यो हक्की भिन्न कसरी